ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ FILE တစ်ခု EXCEL ကို RESTORE လုပ်နည်း - EXCEL ကို - 2019
မကောင်းတဲ့ Excel ကိုဖိုင်ကို fix3လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများ
မကြာခဏသင်တစ်ဦး Excel ကိုဖိုင်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ, သင်ဖိုင် format နဲ့ဖိုင်ရဲ့ resolution ကမကိုက်ညီကြောင်းဖော်ပြတဲ့ message ကိုလက်ခံရရှိပါကပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်မလုံခြုံသည်။ ဒါဟာသင်အရင်းအမြစ်ယုံကြည်မှသာလျှင်ဖွင့်လှစ်ရန်အကြံပြုသည်။
မဟုတ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်လုပ်ပါ။ အတော်ကြာဖိုင်တွေထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို recover ကူညီနည်းလမ်းများ * .xlsx, ဒါမှမဟုတ် * .xls Excel ကိုရှိပါတယ်။
Microsoft က Excel ကိုနည်းလမ်း Restoring
အထူး tools များအားဖွငျ့ recovery
Microsoft က Excel ကိုခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုပျက်စီးဖိုင်တွေမဖွင့်များ၏အထူး function ကိုထပ်ပြောသည်။ မမှန်ကန်ကြောင်း Excel ကိုဖိုင်ကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသည်:
main menu ကိုအတွက်ကို Select လုပ်ပါ ပွင့်လင်း (Open ကို).
တြိဂံခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ပွင့်လင်း (Open ကို) အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ။
drop-down submenu ကို Select လုပ်ပါ ( ... ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း) ... ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း.
ထို့နောက်မိုက်ကရိုဆော့ဖ Excel ကိုလွတ်လပ်စွာဖိုင်ကိုအတွက်အချက်အလက်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဆုံးမခြင်းလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးဒါမှမဟုတ်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဒေတာတွေနဲ့ပွင့်လင်း Excel ကို spreadsheet အပေါ်သို့, သို့မဟုတ်ပါကသတင်းအချက်အလက်ရယူဖြစ်နိုင်မဟုတျကွောငျးသတင်းပို့ပါ။
Microsoft က Excel ကိုအတွက်စာရင်းဇယားများအတွက် algorithms အဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးသည်, ပျက်ယွင်းနေ Excel ကိုစားပွဲပေါ်မှာအပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်နာလန်ထူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်ကြီးမားသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤနည်းလမ်းသည်အသုံးပြုသူများမကူညီဘူးနှင့် Microsoft Excel ကို junk .xlsx / .xls file ကို "ပြုပြင်" ရန်ပျက်ကွက်။
မှားယွင်းနေသည် Microsoft Excel ဖိုင်များကို၏ဆုံးမပဲ့ပြင်များအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအထူးကိရိယာ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားရှိပါတယ်။ ဥပမာတစျခုဖွစျနိုငျ Excel ကိုများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Toolbox ကို။ ဤသည်ဂျာမန်, အီတလီ, အာရနှင့်အခြားသူများအပါအဝင်အများအပြားဘာသာစကားများအတွက်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ interface ကိုအတူရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့ software ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူရိုးရှင်းစွာ utility ကိုနှင့်ကလစ်နှိပ်များ၏ကနဦးစာမျက်နှာအတွက်ပျက်စီးသွားသော file ကိုရွေးချယ် သုံးသပ်ကြည့်ရှု။ မမှန်ကန်ကြောင်းဖိုင်ကိုမဆိုရရှိနိုင်သည့်ဒေတာ extract တွေ့ရှိလျှင်, သူတို့သည်ချက်ချင်းအစီအစဉ်၏ဒုတိယစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြသလျက်ရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်သရုပ်ပြအပါအဝင်တစ်ဦး Excel ကိုဖိုင်အချက်အလက်များကို tab ကို2program ကိုအပေါ်ပြသနေသည်မှာတွေ့ရှိ Excel ကိုများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Toolbox ကို။ ။ ဒါကသည်အဓိကမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ program တစ်ခုဝယ်ဖို့မလိုအပ်လည်းမရှိ: က non-အလုပ်လုပ် Excel ကိုဖိုင်ကိုပြင်ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ?
အဆိုပါလိုင်စင်ဗားရှင်း Excel ကိုများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Toolbox ကို (License ကို $ 27 ကုန်ကျ), သငျသညျ * .xlsx ဖိုင်ထဲမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်ဒေတာကိုကယျတငျနိုငျနှငျ့သငျ Microsoft က Excel ကို install လုပ်ပါလျှင်အသစ်တစ်ခု Excel ကို spreadsheet သို့တိုက်ရိုက်ဒေတာတင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
Excel ကိုများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Toolbox ကိုသာကို Microsoft Windows စနစ်များအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အခုတော့ရရှိနိုင်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသင့်ရဲ့ server များပေါ်တွင် Excel ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အသုံးပြုသူဝန်ဝဘ်ဘရောက်ဇာ, ဆာဗာပေါ်မှာဖိုင်တစ်ဖိုင်နှင့်ကုသမှုပြီးနောက်, ပြန်လည်နာလန်ထူရလဒ်များကိုကိုသုံးနိုင်သည်။ နှင့် Excel ကိုပြန်လည်နာလန်ထူအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဖိုင်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်ဥပမာဖြစ်ပါတယ် //onlinefilerepair.com/ru/excel-repair-online.html။ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုထက်ကိုတောင်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်သုံးပါ Excel ကိုများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Toolbox ကို.
သင်တစ်ဦး Excel ကိုဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
image ကို captcha ကနေဇာတ်ကောင်ရိုက်ထည့်ပါ။
ခလုတ်ကိုနှိပ် "ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများအတွက် file ကို Upload လုပ်ပါ".
Pay ကိုလျှော့ချရေး (ဖိုင်နှုန်း $ 5) ။
အဆိုပါတညျ့ file ကို Download လုပ်ပါ။
အရာအားလုံးက Android, iOS, Mac OS ကို, Window နှင့်အခြားသူများအပါအဝင်အားလုံး devices များနှင့်ပလက်ဖောင်းရိုးရှင်းပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Excel ဖိုင်များကို restore မှမရရှိနိုင်ပါနှစ်ဦးစလုံးပေးဆောင်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရပျက်စီး Excel ကိုဖိုင်ကနေဒေတာတွေကိုပြန်လည်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ, recovery ကို Toolbox ကိုဒါဟာ 40% ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့လျှို့ဝှက်ဒေတာဆံ့ အကယ်. Excel ဖိုင်များကိုသို့မဟုတ် Microsoft Excel ဖိုင်များပျက်စီးခြင်းအများကြီးခံကြပါပြီ, Excel ကိုများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Toolbox ကို ဒါဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေ option ကိုရလိမ့်မည်။
ဒီ Excel ကိုဖိုင်ပျက်စီးသီးခြားအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်ဒါမှမဟုတ်သင်က Windows နှင့်အတူ devices များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်: //onlinefilerepair.com/ru/excel-repair-online.html.